Shiinaha Custom Tungsten Carbide Khatimidii Ring for Mechanical Seals Warshadaha iyo Warshad | N&D Carbide
Custom Tungsten Carbide Khatimidii Ring for Khatimidii makaanikada
* Ballaca Dibedda: 10-800mm
Tungsten carbide (TC) waxaa si weyn loogu isticmaalaa sida wajiyada shaabadaysan ama siddooyin leh adkeysi-xiran, xoog jab xoog leh, kuleyl kuleyl saa'id ah, kuleyl yar ku balaarin wada shaqeyn .Tungsten carbide seal-ring wuxuu u qeybsami karaa labada wareeg ee shaabad-wareeg ah iyo Labada nooc ee ugu caansan ee tungsten carbide seal face / ring waa isku-xidhayaasha cobalt iyo nickel binder.
Tungsten carbide shaabadaha farsamada ayaa si isdaba joog ah loogu isticmaalaa bamka dareeraha si loogu beddelo qanjidhada iyo daboolka bushimaha. tungsten carbide seal farsamada Mashiinka leh shaabadda farsamada waxay u qabtaan si wax ku ool ah guud ahaanna waxay u qabtaan si kalsooni leh muddo dheer.
Marka loo eego qaabka, shaabadahaas ayaa sidoo kale loo yaqaannaa tungsten carbide siddooyin farsamo. Sababta ugu weyn ee maadada carbide tungsten, tungsten carbide fargallada shaatiga ayaa muujinaya adkaanta sare, tan ugu muhiimsanina waxay tahay inay iska caabiyaan daxalka iyo xoqidda si wanaagsan. Sidaa darteed, giraan tungsten carbide siddooyin farsamo ayaa leh adeegsi ka ballaaran shaabadaha qalabka kale.
Tungsten carbide shaabadda farsamada ayaa la siiyaa si looga hortago dheecaanka la soo tuuray ee ka soo daadanaya dariiqa wadista. Dariiqa baxsiga ee la kontaroolay wuxuu u dhexeeyaa laba sagxad fidsan oo lala xiriirinayo wiishka wareegaya iyo guryuhu siday u kala horreeyaan Farqiga dariiqa daadashada ayaa ku kala duwan maaddaama wajiyada ay la kulmayaan culeysyo dibadeed oo kala duwan kuwaas oo u muuqda inay dhaqaajinayaan wajiyada midba midka kale.
Wax soo saarku wuxuu ubaahan yahay qaab dhismeedka usheeda dhexe usheeda dhexe qaabkiisa marka loo fiiriyo nooca kale ee shaabadda farsamada maxaa yeelay shaabadda mashiinka ayaa ah nidaam aad u dhib badan oo shaatiga farsamada uusan wax taageero ah siinin usha.
Tungsten carbide siddooyinkiisa farsamada ayaa leh laba nooc oo asaasi ah:
Cobalt xiran (Codsiyada Ammonia waa in laga fogaadaa)
Nikkel xiran (Waxaa loo isticmaali karaa Amonia)
Caadi ahaan 6% qalabka wax lagu xidho ayaa loo isticmaalaa tungsten carbide siddooyin farsamo, inkasta oo noocyo badan la heli karo. Qalabka Nickel-bonded tungsten carbide ee farsamooyinka shaashadda ayaa aad ugu badan suuqa suuqyada biyaha qashinka sababtoo ah caabbintooda wasakhda oo fiicnaatay marka la barbar dhigo walxaha ku xiran kobalt-ka.
Wareegyada shaashadda Tungsten Carbide ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa sidii wejiyada shaabadda ee mashiinnada mashiinnada loo tuuro, iskudhafyada wax-isku-duwayaasha iyo kiciyeyaasha laga helo warshadaynta saliidda, dhirta kiimikada, dhirta bacriminta, warshadaha macdanta, macdanta, warshadleyda dawooyinka. Giraanta shaabadda ayaa lagu dhejin doonaa jirka bamka iyo wareegga wareegga, wuxuuna ka sameysmi doonaa wajiga ugu dambeeya ee wareegsan iyo giraanta ma guurtada ah ee dareeraha ama gaaska.
Waxaa jira xulasho weyn oo ah cabirro iyo noocyo ka mid ah giraanta giraanta fidsan ee tungsten carbide, waxaan sidoo kale kugula talin karnaa, qaabeyn karnaa, horumarin karnaa, soo saari karnaa alaabooyinka sida ku cad sawirada iyo shuruudaha macaamiisha.
TC Ring Qaab tixraac ah
Waxyaabaha Fasalka Tungsten Carbide Khatimidii Ring (Tixraac Kaliya)
Hore: Tungsten Carbide Seal Ring oo leh Talaabo loogu talagalay Khatimidii Farsamada
Xiga: Tungsten Carbide Bush ee saar Bamka Korantada
Wareegyada Shaashadda Carbide Valve
Giraanta Khatimidii Carbide Cemented
Giraanta Kursiga Wareegga Carboodka Cemented
Qaybo Xidho Carbide Cemented
Giraanta Khatimidii Tungsten Carbide Khatimidii
Giraanta Flat ee Khatimidii Farsamada
Qalabka Farsamada Khatimidii
Tungsten Carbide Cobalt Wareegtada Khatimidii Khatimidii
Tungsten Carbide Khatimidii siddooyinkii